သိပ်သိချင်နေကြတဲ့အကြောင်း | ATK's Explicit Blog
tags: vaginal contractions
အခုတော့ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းနေကြပါတယ်။
တခြား မကြည့်ပါနဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ ဘလော့(ဂ်)နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ဖတ်စရာ စာတွေ တင်ထားတာပါ။ အဲဒီ့ ဘလော့(ဂ်)ကို သည်ဘလော့(ဂ်)မှာထက် စာပိုတင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သည်ဘလော့(ဂ်)မှာလောက် ၀င်ဖတ်သူ မများပါဘူး။ ကွန်မန့်အရေအတွက်ချင်းဆိုလည်း ဆင်နဲ့ ပုရွက်ဆိတ်လောက် ကွာပါတယ်။
ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ့်စာတွေကို ဖတ်သူ အရေအတွက်နဲ့ လိင်ကိစ္စကို သိချင်လို့ ၀င်ဖတ်သူ အရေအတွက်က ဆယ်ဆမက များပြားနေတာကို ကြည့်ရင်ပဲ လူတွေရဲ့ ထက်သန်မှုကို တွက်ဆလို့ ရနေပါပြီလေ။
(ရန်ကုန် – ၂၄၀၃၁၄)
from → Female Orgasm, For Married Women, For Men
← မိန်းမဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ (၃)
ECee2 အကြောင်း →
ဆရာ့ရဲ့ဘလော့ကို Ecee2 အကြောင်းသိချင်လို့ ရှာရင်းတွေ့ခဲ့တာ ကျွန်တော့ အတွက် တကယ်အဖိုးတန်ပါတယ် ။ ဒီထဲက ပို့စ်တွေအကုန်မဖတ်ရသေးဘူး စာမေးပွဲဖြေပြီးရင်တော့ အကုန်ဖတ်ရဦးမယ်
ဆရာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အဂါင်္ကို ယောကျာင်္းတွေ က လက်နဲ့ မဟုတ်ပဲ ပါးစပ်နဲ့ အာသာဖြေပေးရင် ပါးစပ်ကင်ဆာရောဂါရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဆရာ
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ…. ဆရာရေ… ဆရာပြောသလိုပဲ…. တစ်ခြား စာပေရေးရာတွေမှာ… ဒီလောက်နီးနီး စိတ်ဝင်စားရင်…. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး…. အင်မတန်မှ… အကျိုးစီးပွား များလောက်ရောပေါ့… စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ… ဒါပေမယ့်… အခုတော့… စာဖတ်သူတွေ… ဗဟုသုတရှာသူတွေ များလာပြီလို့…. ထင်မိပါတယ်…. ကျွန်တော်က ကျောင်းဆရာ မဖြစ်သေးတဲ့… ဆရာလောင်းလျာ… တစ်ယောက်ပါ..
ဆရာ ကျနော်အသက်က ၂၄ ပါ သူ့ အသက်ကလည်း ၂၄ပါပဲ လိင်ဆက်ဆံလိုက်လို့ ရာသီရက်မမှန်တာဖြစ်တတ်ပါသလား?လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အကာအကွယ်သုံးပါတယ် တာဆေးတော့မသုံးပါဘူး ဒါပေမယ့် အခုသူမှာရာသီပုံမှန်လာတဲ့အချိန်ထက် ၅ ရက်လောက်နောက်ကျနေပါတယ် အခုထိမလာသေးပါဘူး အရင်သူကလစဉ်ရာသီလာတာမှန်ပါတယ် အတူတူနေဖြစ်တာဒီလမှာ ၅ ရက်လောက်ပဲရှိခဲပါတယ် ကျနော်နယ်ကိုသွားရတော့ အခုထိအတူမနေဖြစ်ပါဘူး လက်ထပ်တဲ့နေ့ကစပြီး ဒီကိစကိုဘယ်လို လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ဆရာအကြံညဏ်လဲပေးပါအုံးဆရာ ဒီလို ဖြစ်တာဟာ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလား လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကျနော်ကောင်းကောင်းသတိထားမိပါတယ် အကာအကွယ်ကမပျက်စီးခဲပါဘူး ကျေဇူးပြုပြီးတစ်ခေါက်လောက်ရှင်းပြပေးပါ
အ​ကြောင်းက ကျ​တော့​ကောင်​မ​လေး ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ အပြာကား​တွေ့လို့ပါ…မိန်းက​လေး​တွေက လည်းအပြာကား​တွေကြည့်​တတ်​တာပဲလားခင်​ဗျာ…
အစကသူ့ကိုကျ​တော်​အရမ်းတန်​ဖိုးထားပါတယ်​..အခုလိုအပြာကား​တွေ့လိုက်​​တော့ဆရာ ကျ​တော့စိတ်​ထဲမှာမသတီ​တော့သလိုပဲ.ပြီး​တော့် သူကနှုတ်​ခမ်းကိုနမ်းတာ​တောင်​ခွင့်​မပြုတတ်​ဘူး..ကျ​တော်​သူ့ကိုပိုမြတ်​နိုးမိတယ်​…အခုလိုအပြာကား​တွေ​တွေ့လိုက်​ရ​တော့ ကျ​တော့သူ့အ​ပေါ်တစ်​မျိုးကြီးဖြစ်​သွားတယ်​.အဲဒါ​ကြောင့်​ မိန်းက​လေး ​တွေအပြာကားကြည့်​​လေ့ရှိလားသိချင်​လို့​လေးစားစွာဖြင့်​ ​မေးလိုက်​ပါတယ်​ခင်​ဗျာ
မမြင်ဖူး၊ မသိဖူးသေးတာကို မြင်ဖူး သိဖူးချင်တာ မိန်းကလေးရယ်၊ ယောက်ျားလေးရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံး အတူတူပါ။ မိန်းကလေးတွေလည်း ကြည့်ချင် ကြည့်မှာပေါ့။ သူ့ဖုန်းထဲမှာ တွေ့တယ်ဆိုတော့ သူ့ဖုန်းကို ယူကြည့်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆိုးတယ်ဗျ။ သမီးရည်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လင်မယားဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့စည်း ကိုယ့်စည်း ထားအပ်တယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို မလေးစားတဲ့ သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Right to Privacy ဆိုတာကို ချိုးဖောက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက အပြာကား ကြည့်တာထက် ဆိုးရွားတဲ့ အမူအကျင့်လို့ မြင်မိရပါတယ်။
phyo Lay permalink